LEGO Harry Potter 76391 Hogw တွင်မည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်ရမည်နည်းarts Icons စုဆောင်းခြင်း?
12 / 04 / 2021 13 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1093 Views စာ0မှတ်ချက် 10283 NASA အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Discovery, 80012 မျောက်ဘုရင်က Warrior Mech, ရွှေရောင်, Gryffindor, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်မီးသတ်၏ Goblet, ရှိပါတယ်, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, မျှော, မှော်, ကွမ်းခြံကုန်း, ဦး ထုပ်စီခြင်း, ဓားကို
ကောလဟာလ ဟယ်ရီပေါ်တာ အစုံ Hogw အချို့ယူလာနိုင်ပါသည်artဘဝအတွက်အများဆုံးမှော်အရာများ Lego သို့သော်မည်သည့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုပြောင်းလဲရန်အတွက်ရွေးချယ်မည်နည်း။
A Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ တိုက်ရိုက် - စားသုံးသူသီးသန့်အစုံသည် ၇၆၃၁၁ Hogw ဖြစ်သည်ဟုကောလာဟလသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်arts Icons Collection နှင့် Wizarding World မှပစ္စည်းများအနည်းငယ်ပါဝင်သည်ဟုဆိုကြသော်လည်းနာမည်ကြီးမှော်ဆရာကျောင်းမှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသောကျားကန်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ Hogw တွင်သိမ်းဆည်းထားarts, ငါတို့သည်အထပ်မံခံရဖို့အခွင့်အလမ်းကိုရပ်တည်ကြောင်း arcane အရာဝတ္ထုအနည်းငယ်အတူတကွထားပါတယ် Lego အုတ်။ သတိရပါ, ဒီထင်ထား set ကိုသည်အထိကောလာဟလသာဖြစ်သည် Lego Group မှတရားဝင်ကြေငြာသည်။
Quidditch ၏တောက်ပသောအထိမ်းအမှတ်သည်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောမော်ဒယ်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်နိုင်သည် ရှိပြီးသား။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးတည်ဆောက်မှုသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုကျန်ရှိနေသေးသော်လည်းကောလာဟလသတင်းများအရဒေါ်လာ ၂၄၉.၉၉ ပါဈေးနှုန်းချိုသာစွာတပ်ဆင်ထားသည့်အရာတစ်ခုသည် ပို၍ မှန်ကန်သောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ Lego အုပ်စုသည်ထိုကဲ့သို့သောအစုံနှင့်အတူ၎င်း၏ catalog သို့ပြန်စည်ရွှေအုတ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် 80012 မျောက်ဘုရင်က Warrior Mech နှင့်ရွှေ Snitch ၏ရောင်ခြည်ကိုဖမ်းယူဖို့အတော်လေးအဖြစ်ပြီးပြည့်စုံသောဘာမှမရှိဘူး။
အဆိုပါ Sorting ဦး ထုပ်
Hogw ရှိကျောင်းသားသစ်များကိုအိမ် ၄ လုံးတွင်အဓိကထားသတ်မှတ်ပေးသည်arts ကိုခွဲခြားထားတယ်, အနည်းငယ်အရာဝတ္ထု sorting ဦး ထုပ်ကဲ့သို့ကျောင်းနှင့်နီးကပ်စွာအတော်လေးနီးကပ်စွာချည်ထားကြသည်။ သင်၏စိတ်ဆန္ဒ၊ အိပ်မက်များနှင့်အခြားအရာများကိုသင်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဤစိတ်ပါ ၀ င်စားသောခေါင်းကိုက်နိုင်သည်။
အဆိုပါ sorting ဦး ထုပ်ပြီးသား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်ကပ်အပ်နှံရှိနိုင်ပါသည် Lego အုတ်, သို့သော်အဆင့်မြှင့်ထားသောဗားရှင်းသည်မျက်နှာကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအခွံများနှင့်တွန့်တိုခြင်းကိုအထူးဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့သံသယ Lego ဒီဇိုင်းပညာရှင်များသည်သင်၏ပညာရေးဆိုင်ရာကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်လုံလောက်သောမှော်အတတ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
အန္တရာယ်အရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် artefacts Hogw သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏artလုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် Mirror Erised သည်ပုံမှန်အနက်ရောင်ထင်ထင်ရှားရှားထင်ထင်ရှားရှားထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နိုင်သည့်ထူးခြားသောဘောင်တစ်ခုဖြင့်သင်၏အနက်ရှိုင်းဆုံးနှင့်အပြင်းထန်ဆုံးဆန္ဒများကိုပြသရန်ဖန်တီးခဲ့သည်။
A Lego ဒီပစ္စည်း၏အပန်းဖြေမှုသည်တောက်ပနေသောအုတ်များနှင့်ပင်ရောင်ပြန်ဟပ်ရန်ပြသရန်ခက်ခဲနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်စင်တာအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာဟယ်ရီမြင်တွေ့ခဲ့သည့်မြင်ကွင်းကိုအနုပညာလက်ရာများဖြင့်အပန်းဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့မိဘများကသူ့အနားတွင်ပျော်ရွှင်စွာရပ်နေသည်။ အသေးစိတ်တည်ဆောက်မှုအတွင်းတွင်ထူးခြားသောနည်းစနစ်များပါ ၀ င်ပြီးထိုကဲ့သို့တည်ဆောက်မှုသည်ဂိမ်းတွင်ရှိသည့်အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းများကိုပြန်လည်ခေါ်ယူလိမ့်မည်။
Goblet of Fire ၏ဇာစ်မြစ်ကိုအတိအကျမသိရသေးပါ။ ဤပွဲကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် Triwizard Tournament တွင်စတင်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၄ င်း၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မသိကျွမ်းသူများစွာရှိခဲ့ပြီးထိုဖြစ်ရပ်တွင်မည်သည့်ကျောင်းအတွက်မည်သူတိုက်ခိုက်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Hogw တွင်သာတွေ့ရသည်arts ပေမယ့်အလွန်သြဇာကြီးသောကြောင့်စာအုပ်နှင့်ရုပ်ရှင်များအတွက် namesake အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
A Lego Goblet of Fire ၏တည်ဆောက်ခြင်းသည်အတိအကျမဟုတ်သော်လည်း၎င်းအတွက်အခွင့်အလမ်းအချို့ရှိသည် Lego ဒီဇိုင်းပညာရှင်များသည်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအပြာမီးတောက်များနှင့်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းဆွဲသူများနှင့်ပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်မည့်သူများ၏အမည်များပါ ၀ င်သည့်စက္ကူဒီဇိုင်းအချို့ပင်ရှိနိုင်သည်။ Goblet သည် 18+ တည်ဆောက်မှုဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်မှမှော်ဆန်သောအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
အနည်းငယ်သောအရာဝတ္ထု Hogw နှင့်အတော်လေးနီးကပ်စွာချည်ထားလျက်ရှိသည်artGodric Gryffindor ၏ဒဏ္blာရီဓါးအဖြစ်စုန်းအတတ်နှင့်ဝိဇ္ဇာအတတ်သင်ကျောင်း။ ဒီအရာဝတ္ထုအတွက်မျှတသောအသုံးပြုမှုကိုမြင်တော်မူ၏ ဟယ်ရီပေါ်တာ ပထမ ဦး ဆုံး Sorting Hat တွင်ပေါ်ပေါက်လာသည့်အချိန်မှ စတင်၍ ရဲရင့်သော Neville Longbottom နှင့်အတူ၎င်း၏နောက်ဆုံးအသွင်အပြင်သို့ကူးပြောင်းသွားသည်။
ဒီမှာလည်းရှိတယ် Lego အပိုင်းအစတစ်ခုကိုအထူးပြုလုပ် ထား၍ ၎င်းသည်ပိုမိုကြီးမားသောဗားရှင်းအသေးစိတ်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောဓါးသည်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် Lego ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူများအနေဖြင့်ငွေဒြပ်စင်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ငွေများဖြင့်စည်ထည်ယွန်းထည်များကိုပိုမိုမိတ်ဆက်ပေးမည် 10283 NASA အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Discovery.
← LEGO သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နာမည်အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ဥယျာဉ်အစက်အပြောက် →